Toyota Crown Athlete 2004 (#681846) ကို Dawbon မြို့နယ်တွ... | CarsDB
Lot Number: #681846
License expired date is nearly about two month. Car investigations is already done at KaNyaNa.
GGI Insurence have left about5months
price 350 (a little nego)
*** CarsDB တွင်ကြော်ငြာထားသောကားဟု ပြောကာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ***
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Thura မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Crown Athlete 2004 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။